Mid Ka Mid Ah LIXDII Ciyaartoy Ee Kooxaha Premier League Laga Helay Fayraska Karoona Oo Warbaahinta Dareenkiisa La Waadaagay. - Gool24.Net
Mid Ka Mid Ah LIXDII Ciyaartoy Ee Kooxaha Premier League Laga Helay Fayraska Karoona Oo Warbaahinta Dareenkiisa La Waadaagay.
Waxa uu maamulka Premier League dhawaan shaaciyay in lix ciyaartoy laga helay farayska karoona kadib markii baadhitaan lagu sameeyay dhamaan ciyaartoyda 20 ka kooxood ee Premier league ka hor intii aan tababarka shalay lagu soo laaban.
Waxaa hore loo sheegay in lix ciyaartoy noqdeen kuwo laga helay karoona laakiin hadda waxaa dareenkiisa soo bandhigay mid ka mid ah lixdan ciyaartoy oo ka tirsan kooxda Watford.
Ciyaartoyda kooxda Watford qayb ka mid ah ayaa iska diiday in ay tababarka ku soo laabtaan laakiin Adrian Mariappa waa xidiga kooxda Watford ee laga helay karoonaha wuxuuna tilmaamay in haddii aanu tababarka ku soo labaan lahayn aanu ogadaeen in uu faraysan sido.
Adrian Mariappa oo markii ugu horaysay warbaahinta la hadlay ayaa yidhi: “Aad ayay u cabsi badan tahay sida xaqiiqdii dareemayso isla markaana anigu xaqiiqdii guriga kamaan bixin walina waxaa la iga helay fayraska”.
Adrian Mariappa oo u waramayay Telegraph Sport ayaa aaminsan in haddii aanu tababarka Watford ku soo laaban lahayn aanu ogaadeen in uu cudurkan la nool yahay wuxuuna yidhi: “Haddii ayna xaqiiqdu ahayn in aan dib ugu soo laabtay tababarka oo aan tijaabada baadhitaanka qaatay, kadib waligay maan ogaadeen in aan fayraska qabay, waxyaabahana sidii caadiga ahayd ayaan u wadan lahaa. Xaqiiqdii waa wax aad loola yaabo”.
Kabtanka kooxda Watford ee Droy Deeney ayaa dhawaan shaaciyay in aanu ku soo laabanayn tababarka kooxdiisa inkasta oo xidiga cudurkan laga helay ee Adrian Mariappa uu tababarkii kooxdiisa ee uu ku soo laabtay u arkay fursad uu xili hore ku ogaaday in fayraska uu la noolaa.
Adrian Mariappa oo ka hadlaya xaalada qoyskiisa iyo waxa uu badalay ayaa yidhi: “Waxaan la noolahay saddexdayda carruurta ah kuwaas oo kala ah 5,9 iyo 11 sano jir iyo waalidkay, xaqiiqdii hadda waan yyara walwalsanahay iyaga’
“Dhamaantood way fiican yihiin isla markaana wax calaamado ah ma muujinayaan, laakiin ma caawin kartid iyaga, laakiin waxaan filayaa in marka aad ogaato in aad cudurka sido in aad iyaga ka fogaanayso”.
Dhawr ciyaartoy oo ka tirsan kooxda Watford oo ku jiro kabtankooda Droy Deeney ayaan wali ka soo xaadirin tababarka waxayna u arkeen in ay tahay halis naftooda la galinayo halka dadka qaar u arkaan in garoomada madhan iyo tababarka la kala fog yahay ayna wax halis ah keenayn.